A na-ejikarị ya eme ihe n'ọhịa ọgwụgwọ, ụlọ ọrụ petrochemical, ụgbọ njem na ebe a na-ewu ụlọ Nzube nhazi na usoro ihe eji arụ ọrụ, dịka ọmụmaatụ n'ọhịa ụlọ, nsị zuru ezu wdg;
E nwere tumadi ụdị abụọ: equilateral angle steel na ahaghị nchara steel. N'etiti enweghi nkuku nchara, enwere oke onu ogugu na enweghi oke onu.
O nwere nguzogide corrosion siri ike, acid na alkali eguzogide, mmekorita gburugburu ebe obibi nke acid, nchedo radieshon, X-ray, CT radiation radiation radiation, mbibi, mkpuchi mkpuchi na otutu ihe ndi ozo, ma obu ihe nkpuchi radieshon. Ndị nkịtị thi
Aluminom bụ ọla ọcha na ọkụ ọla ọcha, kewara n'ime aluminom na aluminom dị ọcha. N'ihi na ọ bụ ductility, na-emekarị ka ọ bụrụ mkpanaka, mpempe akwụkwọ, udi eriri. Enwere ike kewaa ya: aluminom efere, eriri igwe, warara, ọkpọkọ, na mkpanaka. Aluminom nwere ọtụtụ ihe magburu onwe ya,
Ngwá Ọrụ Steel
Ngwá ọrụ ígwè na-eji na-Nlụpụta oyi punching anwụ, na-ekpo ọkụ ibe ya bụrụ na-anwụ, na-anwụ mgbatị anwụ na ndị ọzọ ụdị steel.Mould bụ isi ngwá ọrụ maka n'ichepụta akụkụ na ulo oru ndi dị ka ígwè n'ichepụta, redio ngwá, Motors na electric ngwa.
<< <Gara aga 12